अचम्मको देश लेखक कार्तिकेयको उत्कृष्ट कृति हो । यस कृतिको नेपाली संस्करण तेस्रो पटक विद्यार्थी प्रकाशनबाट प्रकाशित छ । त्यस्तै यस कृतिको अङ्ग्रेजी भाषाको संस्करण दोस्रो पटक बि. एन. पुस्तक संसार, बागबजार, काठमाडौं फोन ः ०१४२३३८७४ बाट प्रकाशित भएको छ । यो किताबको अङ्ग्रेजी अनुवाद महेश पौड्यालले गरेका हुन् । पौड्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा अङ्ग्रेजी विषय पढाउँछन् । यस उपन्यासमार्फत् लेखक घिमिरेले आदर्श समाज निर्माणको सपना प्रस्तुत गरेका छन् । जुन पढ्दा पाठक रोमान्चित नभइरहन सक्दैन ।
त्यो उपन्यास भित्रको एउटा सानो अंश (छोटो कथा) यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।